Saddexda Xikmadle waxaa la socon doona qabow iyo roob Isbaanish | Saadaasha Shabakadda
Saddexda boqor waxaa la socon doona qabow iyo roob Spain
Dad badan, gaar ahaan carruurta, waxay sugayaan imaatinka Saddexda Xikmad leh, maalinta ay heli doonaan hadiyado iyo farxad. Laakiin sanadkan waxay noqon doontaa waqtigii si fiican loo xirxiro, sida la filayo in weji qabow uu ku soo dego jasiiradda maalinta ka horreysa imaatinka Majaajisyadooda Masiixiga ah.
Sida laga soo xigtay saadaasha, cimiladu waxay noqon doontaa wax yar "waalan": xitaa waan kululeyn karnaa maalintii laakiin habeenkii waxaan u baahan doonnaa jaakad wanaagsan si aan uga hor tagno hargab.
1 Muxuu noqon doonaa heer kulku?
2 Roobab ma di’i doonaan?
Muxuu noqon doonaa heer kulku?
Heerkulka, sida aan ku aragno sawirka, wuu ka yaraan doonaa ama ka yaraan doonaa inta lagu jiro maalinta, gaar ahaan dhammaan xeebta Mediterranean iyo labada jasiiradood (Balearic iyo Canary Islands), halkaas oo heer kulka taabanayo oo xitaa ka badnaan kara 20 darajo Celsius. Qeybta waqooyi ee jasiiradda, bay'addu xoogaa way qaboobi doontaa, markay tahay 10-15ºC.
Habeenkii heerkulku hoos buu u dhici doonaa, gaar ahaan laga bilaabo Jimcaha marka heerka barafka uu hoos ugu dhici doono 600-700 mitir waqooyiga dalka.
Roobab ma di’i doonaan?
Runtu waxay tahay haa. Saddexda Xikmada leh waxay la kulmi doonaan dhibaatooyin badan inta lagu gudajiro Dhoolatuska iyo bixinta hadiyadaha. Wejiga hore wuxuu ka soo gali doonaa galbeedka jasiiraddiisa isagoo ka tagi doona roobab muhiim ah Galicia, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Cantabria, Basque Country iyo, guud ahaan, dhulka oo dhan, maadaama ay aad ugu yaryihiin Jasiiradaha Balearic.
Sidaas darteed, Waxaan haysannaa dhammaadka ciidaha Kirismaska ​​oo biyo la mariyo, oo leh cirka daruuro iyo dharka qaboobaha. Laakiin ma jiraan wax dhibaato ah oo aan iman: roobabkan waxay ka caawin doonaan baraagaha inay sii wadaan inay buuxiyaan, wax si gaar ah faa'iido u yeelan doona xagaaga.
Waxaan rajaynayaa in maqaalkani wax kuu taray oo aad ku dhamaysan karto raaxaysiga kirismaska, xitaa haddii aad haysato joodar rain.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Saadaalin » Saddexda boqor waxaa la socon doona qabow iyo roob Spain
Tani waxay noqon doontaa cimilada jasiiradaha Balearic sannadka 2038